Tag: horonantsary fandraharahana | Martech Zone
Tag: horonantsary fandraharahana
Fantatsika rehetra ny dikan'ny olona rehefa miteny izy ireo hoe “horonan-tsarimihetsika orinasa.” Raha teôria dia mihatra amin'ny horonan-tsary nataon'ny orinasa iray io teny io. Mpamaritra tsy miandany io taloha, fa tsy izany intsony. Androany, maro amintsika ao amin'ny varotra B2B no milaza ny horonan-tsarimihetsika miaraka am-panesoana kely fotsiny. Izany dia satria tsy mendrika ny horonan-tsarimihetsika orinasa. Lahatsary momba ny orinasa dia misy rakitsary stock an'ny mpiara-miasa manintona loatra miasa ao amin'ny efitrano fihaonambe. Orinasa
Antony tsy tokony hampiantranoanao ny horonan-tsarinao manokana
Talata, Aogositra 12, 2014 Talata, May 3, 2016 Douglas Karr
Mpanjifa izay manao asa tsy mampino amin'ny lafiny famoahana ary mahita valiny miavaka dia nanontany hoe inona ny hevitro momba azy ireo mampiantrano ny lahatsarin'izy ireo ao anatiny. Nahatsapa izy ireo fa afaka mifehy tsara kokoa ny kalitaon'ireo horonantsary ary manatsara ny fanatsarana ny fikarohana. Ny valiny fohy dia tsia. Tsy hoe satria tsy mino aho fa ho tsara amin'izany ry zareo, fa noho izy ireo manao ambanin-javatra ny zava-tsarotra atrehin'ilay horonan-tsary nampiantrano.
WeVideo: Fanovana sy fiaraha-miasa amin'ny horonantsary an-tserasera
Alatsinainy, Aogositra 19, 2013 Zoma, Septambra 25, 2015 Douglas Karr
WeVideo dia rindrambaiko ho toy ny sehatra serivisy ahafahan'ny mpivarotra mamorona sy mamoaka horonan-tsary an-tserasera. WeVideo dia manome vahaolana mora ampiasaina sy farany ho an'ny fampidinana horonantsary, fanitsiana horonantsary, famoahana horonan-tsary ary fitantanana ireo fananana horonan-tsarinao - izany rehetra izany dia ao anaty rahona, ary azo idirana amin'ny tranokala na tablette na fitaovana finday rehetra. Vonona amin'ny finday ireo horonantsary navoaka tamin'ny alàlan'ny WeVideo. WeVideo for Business dia misy koa ny vahaolana finday ho an'ny fitaovana Android sy iOS hahafahan'ireo mpivarotra misambotra horonantsary ary
Niasa nandritra ny volana vitsivitsy lasa izahay mba hahazoana fitaovana video DK New Media. Na dia manana orinasan-dahatsary mahatalanjona aza isika izay manana fiakarana mafy, indraindray dia hitantsika fa te handraikitra sy mampifangaro horonantsary koa izahay - ary tianay hivoaka ho matihanina izany. Ny mpamoron-tsary anay dia mahay ihany koa amin'ny fampifangaroana horonantsary sy feo ka dia lasa nandeha nitady fitaovana fototra